WASIIRKA CAAFIMAADKA DR. XAGLATOOSIYE OO MADAXTOOYADDU KA DALBATAY INUU KA NOQDO MUSHARAXNIMADIISA IYO JAWAABTA UU KA BIXIYAY SOO JEEDINTAA | Saxil News Network
WASIIRKA CAAFIMAADKA DR. XAGLATOOSIYE OO MADAXTOOYADDU KA DALBATAY INUU KA NOQDO MUSHARAXNIMADIISA IYO JAWAABTA UU KA BIXIYAY SOO JEEDINTAA
November 7, 2015 - Written by admin
Hargeisa (SAXILNEWS)_Wasiirka Caafimaadka Somaliland Dr. Saleebaan Ciise Xaglatoosiye oo kamid ah Musharixinta u tartamaya jagada Maaxweyne ku xigeenka Xisbiga KULMIYE, marka la gaadho doorashada shirka golaha dhexe ee ku beegan 10 Nov 2015, kaas oo sadex maalmood inaga xigaan, ayaa loo soon jeediyay inuu ka tanaasulo musharxnimadiisa.
Sidaana waxa shebekadda wararka ee Garoodinews u sheegay warar laga helay ila wareedyo u dhow qasriga Madaxtooyadda Somaliland, kuwaas oo sheegay in Wasiir Xaglatoosiye Madaxtooyadu usoo jeedisay inuu ka tanaasulo musharaxnimadiisa iyo loolanka kaanabynka uu ku jiro’ ka hor inta aan la gaadhin shirka golaha dhexe ee KULMIYE.
Dhinaca kale Wasiir Xaglatoosiye oo aanu khadka isgaadhsinta kula xidhiidhnay, nooma suurta gelin inaanu helo si aanu su,aalo uga wediino xaqiijinta dhinaciisa ee wararkaa, balse dad ku dhow dhow, ayaa u sheegay inuu qorshaynayo sidii uu Madaxwenaha ugu gudbin lahaa is casilaad, isagoo ka cabsiqaba in xilka laga xayuubiyo, maadaama uu ku gacansaydhay soo jeedinta Madaxtooyadda